EPRDF Oo Shaaciyey Inuu Si Rasmi Ah Ugu Guuray Xisbiga Cusub Ee PP, Si Cadna U Beeniyey In Shuruudo Ay La Yimaaddeen Qowmiyadaha Soomaalida Iyo Kuwa Kale - Jigjiga Online
HomeSomalidaEPRDF Oo Shaaciyey Inuu Si Rasmi Ah Ugu Guuray Xisbiga Cusub Ee PP, Si Cadna U Beeniyey In Shuruudo Ay La Yimaaddeen Qowmiyadaha Soomaalida Iyo Kuwa Kale
EPRDF Oo Shaaciyey Inuu Si Rasmi Ah Ugu Guuray Xisbiga Cusub Ee PP, Si Cadna U Beeniyey In Shuruudo Ay La Yimaaddeen Qowmiyadaha Soomaalida Iyo Kuwa Kale
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Xisbiga EPRDF ayaa si buuxda ugu dhawaaqay inuu si buuxda loo soo gabo-gabeeyey dhisidda xisbiga qaran ee PP, kaas oo loo gudbin doono guddida doorashooyinka si uu u helo ruqsaddii uu kaga qayb-geli lahaa doorashooyinka.
War-saxaafadeed uu soo saaray xisbigu, ayaa waxa lagu sheegay in shuruudaha ka dhiman xisbiga cusub si degdeg ah loo dhamaysitir doono, iyadoo geesta kalena loogu mahad-celiyey xubnaha xisbigii hore ee EPRDF.
Waxa kale oo uu xisbigu sheegay in dhamaan deegaamada soo koraya ee sida buuxda uga mid noqday xisbiga PP ay shuruud la’aan ugu soo biireen, taas oo meesha ka saartay hadal hore uga soo yeedhay xisbiga xisbiga Dimuquraadiga Soomaalida (XDS) oo sheegay inay hor dhigeen shuruudo.
War-saxaafadeedka oo dhamaystiran waxa uu u dhignaa sidan:
“Dhamaan Masuuliyiinta Iyo Xubnaha Axsaabta Bahwadaagta ah.
Waxaad inbadan usoo halgamayseen in nidaamka takoorka ah ee laydiinku diiday inaad EPRDF kamid noqotaan uu ahaa mid aan sabab lahayn, idinkoo dhamaan kulamada EPRDF iyo fagaarayaasha axsaabtiina kaga hadli jiray.
Sanado badan ayaa kasoo wareegay tan iyo markii ay EPRDF aamintay in su,aashiinu tahay mid sax islamarkaana isla qaadatay in jawaab kuhaboon laga bixiyo.
Golaha dhexe ee EPRDF wuxuu idiinku hambalyaynayaa in laga soo gudbay cagajiidadkii ka jawaabista su,aashiina, maadaama aan soo gaadhnay maalintan taariikhiga ah. Bagaad uga soo gudubteen taariikhdii bahwadaagnimo islamarkaana usoo gaadheen kamid noqoshada nidaam loodhanyahay oo horseedaya halgan wadareed.
Xisbigan wadarta ahi wuxuu inoo suuragalinayaa inaan dhamaanteen sinaano islamarkaana yeelano darajo siman, wuxuuna inoogu baaqayaa inaan dhamaanteen kawada qayb qaadano sidaan ubadali lahayn xaalada dalkeenu ku suganyahay.”
Maxaa dib loogu dhigay muxaadaradii Sheekh Umal ee Muqdisho Miyuu se Saamayn Ku Yeeshay Hadalkii Sheekh Samoow?
SIR QARSOON: Shidaalka Uu Donald Trump Ka Xadayo Suuriya